Semalt सल्लाह कसरी मार्केटिंग रणनीति को रूप मा फेसबुक समूह को उपयोग गर्न को लागी
फेसबुक SEO को लागि अपार मूल्यको छ। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, फेसबुकले केहि धेरै प्रयोग भएको एसईओ विज्ञापन मार्केटिंग सेवाहरू प्रदान गर्दछ। उत्पाद कम्पनीहरूबाट ब्लग र सेवा वेबसाइटहरू। निस्सन्देह, सबैजना फेसबुकलाई राजा एसईओ सोशल मिडिया प्लेटफर्मको रूपमा चिन्न आएका छन्। यद्यपि नयाँ सोशल मिडिया प्लेटफर्मको साथ आउँदैछ, धेरै वेब मालिकहरूले खोजी ईन्जिनमा अप्टिमाइज खोज्दै फेसबुकलाई बेवास्ता गरेर गल्ती गर्न मन पराउँछन्। यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ भविष्यमा हेर्नुहोला, तर तपाईंले त्यसलाई आजको खर्चमा गर्नुहुन्न।
एसईओ मा फेसबुक प्रमुख उपकरण रहन्छ। तपाईंको ब्रान्डको आकार, यसको आकार, र सेवाको बावजुद, फेसबुक सामाजिक मिडियाको गुगल भएको छ। सबै भन्दा राम्रो विश्वास छ कि फेसबुक कुनै पनि समय चाँडै जाँदै छ। तपाईंको व्यवसायले अझै पनि फेसबुकबाट फाइदा लिन सक्ने एउटा तरिका फेसबुक समूहहरू प्रयोग गरेर हो। ब्रान्डेड फेसबुक समूहहरू सिर्जना र प्रबन्ध गरेर, व्यवसायहरूले उनीहरूको मार्केटिंग प्रयासलाई पूरै नयाँ तहमा लैजान सक्दछन्। यो यस्तो सुविधा हो कि धेरै प्रतिस्पर्धीहरूले यसमा क्यापिटलाइजेसन गर्दैनन्।
जैविक रूपमा, फेसबुक केवल चरममा पुगेको छैन तर यसको जैविक खोजीमा गिरावट सुरु भएको छ। आज, तपाईंको फ्यानहरूको केवल%% ले सामग्री देख्दछन् यदि तपाईं मार्केटिंगको जैविक विधिमा अडिनुभयो भने। यसले हामीलाई वास्तविकतामा ल्याएको छ। फेसबुकमा सफल हुनको लागि, प्रयोगकर्ताहरूले भुक्तानी गर्न इच्छुक हुनै पर्छ, विशेष गरी जब जैविक खोजीहरूले परिणामहरू दिइरहेको हुँदैन।
एउटा ब्रान्डेड फेसबुक समूह हुनु धेरै तरिकाहरू मध्ये एक हो जुन तपाईं यस सीमितताको वरिपरि हिंड्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईंको बजेटले तपाईंलाई थप पोष्ट पहुँच प्रायोजन गर्न पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्दैन। यहाँ रोचक part comes â comes आउँछ
तपाईंको आफ्नै फेसबुक समूह भएको
एक व्यवसाय को रूप मा, एक फेसबुक समूह को लागी पनी यो सुनिश्चित गर्न को लागी एक तरिका हो कि तिनीहरु को सबै भन्दा महत्वपूर्ण सामग्री को लागी आफ्नो लक्षित श्रोता द्वारा देखीन्छ। तपाईको सम्भावित र पहिल्यै अवस्थित ग्राहकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा संवाद गर्न यो उत्तम तरिका हो।
कसरी एक फेसबुक समूह तपाइँको ब्रान्ड मद्दत गर्दछ
१. तपाईको समूह पृष्ठमा नयाँ उत्पाद र सेवाहरूको परिचय गराउँनुहोस्
एउटा फेसबुक समूह हुनुको मुख्य कारण यो हो कि तपाईले आफ्नो दर्शकलाई तुरुन्तै तपाईको व्यवसायमा भर्खरको विकासको बारेमा जानकारी गराउनु हुन्छ। एउटा ब्रान्डेड फेसबुक समूह एक कम्पनी द्वारा बनाईएको हो। यसका मामिलाहरू स्टाफ सदस्यहरू द्वारा सञ्चालित हुन् जसले समूहमा प्रशासकको रूपमा काम गर्छन्। यी समूहहरूका सदस्यहरू प्राय: मुख्य प्रशंसकहरू, स्टाफ सदस्यहरू, र कम्पनी वा व्यवसायका लागि नयाँ बच्चा हुन्।
एउटा प्लेटफर्म भएको जहाँ सबैले जडान गर्न सक्दछन् तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम वातावरण यसको ग्राहकहरूबाट सीधा आवश्यक फीडब्याकहरू संकलन गर्न। ब्रान्डहरूले अब पत्ता लगाउन सक्दछन् कि नयाँ उत्पादनहरू वा सेवाहरू आफ्ना ग्राहकहरूलाई कसरी प्रतिक्रिया गर्दैछन्। कम्पनीहरूले नयाँ समूहका साथै आफ्नो समूह सदस्यहरूका लागि कम्पनी अपडेटहरू पनि परिचय गर्न सक्दछन्।
तपाईंको ब्रान्डेड फेसबुक समूह भएकोले तपाईंलाई तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम समुदाय सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईका शीर्ष ग्राहकहरू र सम्भावित नयाँ व्यक्तिलाई तपाईको समूह भित्र नियमित अपडेटहरू पोष्टिंग गरेर जम्मा गर्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो उत्पादन सुरुवातको वाच पार्टीहरू पनि होस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईंको ग्राहकहरूलाई प्रक्रियामा समावेश महसुस गराउँछ।
त्यस्ता घटनाहरूको आयोजना गर्नाले तपाईंको फेसबुक समूहका सदस्यहरूलाई तपाईंको व्यवसायमा भर्खरको विकासको पहिलो हेराई दिन्छ। यसले प्रत्येक पोस्टको वरिपरि उत्साहलाई प्रबर्द्धन गर्न चमत्कार गर्दछ, सदस्यहरूलाई टिप्पणी दिन उत्तम स्थान दिन्छ जुन धेरै विचारहरू बोक्छ।
तपाईंको समूहमा गतिविधिहरू पढेर, तपाईं आफ्नो टीमको सूचना र भरपर्दो प्रतिक्रियाको ठूलो कोठामा खोल्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई तपाईंको सार्वजनिक दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न र आवश्यक छ भने आवश्यक संशोधनहरू गर्न मद्दत गर्दछ। यो तपाइँको ब्रान्डको लागि उत्तम फोकस समूह हो।
जब फेसबुक समूहहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई तपाईंको समूहमा पोष्ट प्रकारका विस्तृत प्रयोग गर्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाईले आफ्नो समूहमा दैनिक तरीकाले निम्न तरीकाले पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
सोमबार: हप्ताको सुरूवात एक शक्तिशाली प्रेरणादायक पोस्टको साथ शुरू गर्दै।
मंगलबार: थोरै रमाइलो समात्नुहोस्। मेम्स र फ्यान सment्लग्नता पोस्ट।
बुधवार: कम्पनीमा भर्खरको भइरहेको घटनामा अपडेट र तपाईंको दर्शकलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि समाचार।
बिहीबार: प्रशंसक संलग्नता पोस्ट र अघिल्ला पोष्टहरूमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरूको जवाफ।
शुक्रवार: सप्ताहन्त बिताउने, आराम गर्ने, र रमाईलो गर्ने एउटा अचम्म तरिका। साथै, पोल लिनुहोस् वा स posts्लग्नता पोस्टहरू चलाउनुहोस्।
२. एउटा सूचना फार्म
होईन, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफ्नो सदस्यको व्यक्तिगत जानकारी वा क्रेडिट कार्ड विवरणहरूको पहुँच गर्नुहुन्छ। यसको सट्टामा, हामी प्रतिक्रिया, सन्देश, र तपाईंको फेसबुक समूह सदस्यहरूको टिप्पणीहरूको सम्पत्तीलाई जनाउँदैछौं। व्यापार समूह भएको सुन्दरता यो हो कि समूहमा भएको हरेक छलफल तपाईंको व्यवसाय र ब्रान्डसँग सम्बन्धित छ।
तपाइँ एक सामाजिक शिक्षा समूह होस्टिंग द्वारा श्रोता अनुसन्धानको गहिरो डुबुल्डी लगाउन सक्नुहुन्छ। व्यवस्थापक अधिकारहरू कायम गरेर, तपाईं कुन पोष्टहरू प्रदर्शित हुनेछन् र तपाईंको सदस्यहरू कसरी व्यस्त छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ। यसले अन्तत: तपाईंको व्यवसायलाई अधिक डाटा दिन्छ।
जब तपाइँ तपाइँको नयाँ उत्पादनहरु, सामग्री, वा सेवाहरु को बारे मा जानकारी काट्नु हुन्छ र ग्राहकहरु र समूह सदस्यहरु लाई अधिक टिप्पणी छोड्ने को लागी अधिक ध्यान दिनुहोस्। के यी व्यक्तिहरू तपाईंको लक्षित डेमोग्राफिक अन्तर्गत पर्दछन्? के तिनीहरू लामो समयदेखि तपाईंको समूहका सदस्यहरू थिए, वा तिनीहरू हालसालै सामेल भए?
तपाईं तिनीहरूको फेसबुक प्रोफाइलमा तिनीहरूको नाम, उमेर, लि gender्ग, र स्थान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं समूह सदस्यहरूलाई सामग्री, उत्पादन, वा सेवाहरूको प्रकारको बारेमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ उनीहरू तपाईंलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छ।
नोट: खोजीमा हुनुहोस् - त्यहाँ राम्रो र नराम्रो समूह सदस्यहरू छन्। फेसबुकका सदस्यहरू बोल्न डराउँदैनन्।
Lent. तपाईको फेसबुक समूह मार्फत उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गर्नुहोस्
यो लेख मार्फत सबै, हामी तपाईंलाई छिटो देखाइरहेका छौं कि कसरी फेसबुक समूहहरूले तपाईंलाई उत्पादनहरू, अपडेटहरू आदि साझा गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि ब्रान्डका लागि सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको ग्राहक सेवाको अर्को स्तर प्रदान गर्नु हो।
अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईंको समूह च्याटमा तपाईंको ग्राहकहरूको संख्या राम्रो छ। तिनीहरू निरन्तर तपाईंलाई उनीहरूको ब्रान्डसँग सामना गर्ने समस्याहरूको अपडेटहरू दिन्छन् र सुझावहरू दिन्छन् कि तपाई के उत्पाद वा सेवाहरूको साथ केहि मुद्दाहरूको समाधान गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे सुझावहरू।
ती समूहका सदस्यहरूले प्रश्न सोध्न र अन्य सदस्यहरू वा तपाईं, समूहको प्रशासकबाट जवाफहरू प्राप्त गर्न सक्थे। तपाईं कसरी भिडियो प्रदान गर्न, सुझाव दिन, र गाईड गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य ग्राहकहरू वा सम्भावित ग्राहकहरू समूहमा आकर्षित हुनेछन् कि सदस्यहरूले समर्पित ग्राहक समर्थन र शैक्षिक सामग्री प्राप्त गर्दछन्। यसले ग्राहकलाई तपाईंको कार्यालय लाइनहरूमा कल गर्न वा सम्पर्क फारमहरू भर्नबाट असर गर्दैन वा रोक्दैन। यसको सट्टामा, यसले बिभिन्न मानवीय कम्पोनेन्टहरू प्रदान गर्दछ, जुन तपाईंको ब्रान्ड र यसको ग्राहक सम्बन्ध सुधार गर्नेमा राम्रो चरण हो।
फेसबुक समूहहरूले अनुभव साझा गर्न र अन्य अनुभवी ग्राहकहरू र ब्रान्डको पछाडिको वास्तविक अनुहारहरूको समाधान फेला पार्न सदस्यहरूको तटस्थ स्थानहरूको रूपमा सेवा गर्दछ। यो तपाइँको ब्रान्डको लागि ठूलो विजय हो किनभने यसले तपाइँको कुनै पनि गलत समाचार वा गलतफहमीलाई तपाइँको ब्रान्डको वरिपरि घुम्न अनुमति दिन्छ। यसले तपाइँको ब्रान्डको बारेमा जनताले राखेको विचारको पनि एक विचार दिन्छ।
User. प्रयोगकर्ता उत्पन्न सामग्रीहरू स .्कलन गर्दै
फेसबुक समूहहरू समीक्षा र प्रशंसापत्र स collect्कलन गर्न प्राय: भ्रमण गरिन्छ र Google मा १ तारे समीक्षाको भाग्य भोग्दैनन्। एक फेसबुक समूह को साथ, तपाईं आफ्नो नकरात्मक समीक्षा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई द्रुत ठेगाना। गुगलमा, तथापि, १-सितारा समीक्षा भनेको तपाईको प्रोफाईलमा देखाउन चाहानु हुने कुरा होइन।
यी मुद्दाहरूको खोजी गर्न, तपाईं केवल तपाईंको समूह सदस्यहरू पोष्टहरू, फोटोहरू, टिप्पणीहरू, वा सर्वेक्षणहरू लिन साझा गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रक्रिया दोहोर्‍याए पछि, तपाईंसँग पर्याप्त डाटा हुनेछ, र तपाईंको समूह सदस्यहरू उनीहरूमा नै धेरै सक्रिय हुनेछन्।
तपाईं यी टिप्पणीहरू, भिडियोहरू, र छविहरू प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्रीको रूपमा संकलन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले यी कुनै पनि प्रयोग गर्नु अघि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पहिले प्रयोगकर्ताबाट अनुमति लिनुभयो। सामग्रीको प्रकार जुन यस जानकारीले सिर्जना गर्दछ सामान्यतया वास्तविक जीवन सामग्री हुन्छ जब तपाईं यसलाई अन्य सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरू जस्तै इन्स्टाग्राम, ईमेलहरू, र ब्लग पोष्टहरूमा साझा गर्नुहुन्छ भने राम्रो गर्छ।
यस फाइदाको अर्को लाभ भनेको ब्राण्डले आश्चर्यजनक ब्रान्ड एम्बेसडरहरू पनि पत्ता लगाउन सक्दछन्। तपाईंको ब्रान्डको प्रशंसकहरूको रूपमा, त्यहाँ ती मानिसहरू छन् जुन सँधै पोष्टहरूमा टिप्पणी गर्न चाँडो हुन्छन् र तपाईंको ब्रान्ड अरूलाई रेफर गर्दछ। तपाईंको ब्रान्ड तब यी प्रशंसकहरू मध्ये केहीमा उनीहरूको स engage्लग्नताको लागि धन्यवाद दिन र उनीहरूको व्यवसायमा सिफारिश गर्न सक्दछ।
उनीहरूलाई थप उत्प्रेरित गर्न, तपाईं त्यस्ता सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई रेफरल बोनस प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, मानौं, १०% वा छुट समर्थन उनीहरूको समर्थनको मूल्यांकनको तरीकाको रूपमा।
फेसबुक समूह भएको धेरै फाइदाहरू विचार गरेपछि, तपाईं हामीसँग सम्पर्क गर्न र प्रक्रिया सुरू गर्न उत्सुक हुनुपर्दछ। यदि तपाईंसँग फेसबुक खाता छैन भने त्यो समस्या होईन। हामी प्रक्रिया मार्फत मद्दत गर्न उपलब्ध छौं, उत्तम ब्रान्ड-उन्मुख फेसबुक खाता सिर्जनाबाट तपाईंको समूह सिर्जना गर्न। हाम्रो सेवाहरूको साथ, हामी तपाईंको फेसबुक प्रोफाईल बजार गर्न सक्दछौं, तपाईंलाई मात्र अनुयायीहरू नभई तपाईंको समूहमा सान्दर्भिक सदस्यहरू प्राप्त गर्दै।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग फेसबुक खाता छ। तपाइँका धेरै प्रतिस्पर्धीहरूले अझै यो रहस्य पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। यसले तपाइँको बजार हावी गर्न एक उत्तम अवसर बनाउँछ। अधिक जान्नको लागि हाम्रो टीमको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस्। हाम्रो पेशेवरहरु राम्रो सेवा को लागी सुसज्जित छन् तपाइँको सबै SEO र वेब व्यवस्थापन आवश्यकताहरू। Semalt विशेषज्ञहरु तपाइँलाई सबै भन्दा गल्तीहरू रोक्न मद्दत गर्दछ।